Apple TV + ndeye Apple inoyerera vhidhiyo sevhisi | IPhone nhau
Mushure memakore angangoita maviri eguhwa, Apple yakaunza yayo yekushambadzira vhidhiyo sevhisi nguva pfupi mushure mekuburitsa kuvandudzwa kweApple TV application, iko kunyorera kwatinogona kuwana iyo zvemukati zvinowanikwa pane ese aripo ekushambadzira mapuratifomu, kwete kuverenga Netflix.
Apple yatanga mharidzo ine vhidhiyo diki iyo inoratidza mamwe emasaini anokwezva aakaita mumakore achangopfuura se Steven Spielberg, JJ Abrams, Jeniffer Aniston, Octavia Spencer… Kwavanotaura nezvekukosha kwekutaura nyaya uye nemabatiro avanozviita.
Apple yakave nekuvapo padariro re Steven Spielberg kuunza iyo nyowani yekushambadzira vhidhiyo sevhisi. Sezvinotarisirwa, uye mukushayikwa kwezvakanyorwa zvemukati, Spielberg akataura pamusoro peimwe yekubudirira kwake kwekutanga paterevhizheni Anoshamisa Nhau, nhevedzano ichave neshanduro nyowani kuburikidza neApple's vhidhiyo yekushambadzira sevhisi.
Ivo vakaonekwawo pachikuva Jeniffer Anniston y Reese witherspon kuendesa komedhi iyo vese vachatamba muApple vhidhiyo yekushambadzira sevhisi. Steve Carell, anozivikanwa nhevedzano Hofisi, akaonekwawo nekushamisika mune imwecheteyo mharidzo.
Jason Momoa Akaonekwawo pachikuva kuti aratidze zvirimo zvaari kugadzirira Apple TV + padivi paViola Davis. Asi havasi ivo vega vatambi nevatungamiriri vakaonekwa pachikuva, nhanho uko kusaina kwese kwakasvika pachibvumirano neApple kugadzira zvigadzirwa zvepakutanga zvave kutenderera.
Ivo havaigona kupotsa JJ Abrams, mumwe wevatungamiriri vakabudirira kwazvo mumakore achangopfuura uye akarwira Apple nguva dzinoverengeka kuti agone kusaina pachikuva chake, chimwe chinhu chaakazowana mwedzi mishoma yapfuura, sekukuzivisa kwatakaita muApple News.
1 Izvo Apple TV + inotipa
1.1 Ini ndaisakwanisa kupotsa Oprah
Izvo Apple TV + inotipa
Apple TV + ichava chikuva, sekureva kwaApple, ndezvipi zvirinani zvemukati zvemukati zvichatipa, zvese zvakateedzana uye mumafirimu uye zvinyorwa. Iyo Cupertino-based kambani yakapa zvishoma zvishoma nezve iyo nyowani yekushambadzira vhidhiyo sevhisi iyo iyo yainoda kuchengetedza Apple vashandisi.
Zvese zvirimo paApple TV + zvichave zviripo munyika dzinopfuura zana, zvichatibvumidza kurodha zvirimo, zvichave zvisina kushambadzira, uye zvichazosvika pamusika gore risati rapera. Apple hainawo kutaura nezvekuti ichadhura zvakadii.
Ini ndaisakwanisa kupotsa Oprah
Kunyangwe isu tisingagare muUnited States, isu tainzwa chaizvo nezve Oprah Winfrey's show. Oprah anga ari mumwe wekutanga kusaina kweApple pairi yekushambadzira vhidhiyo sevhisi, uyo akarumbidza mikana inopihwa neApple yekushambadzira vhidhiyo sevhisi, kuwanikwa pane ese nhare mbozha, sekunge Netflix haina kupa zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple TV + ndeye Apple inoyerera vhidhiyo sevhisi
Mavhidhiyo akati wandei ezvekutaura ave kuwanikwa paYouTube